Topnews:-Xafladii Madaxweyne Garguurte ee London oo ku dhamaatay qabyaalad iyo xumaan.
03 Febraury 2013 Waagacusub.com- Odayaashii iyo hooyooyinka Somalida ee laga aruuriyay lacagtii lagu kireeyay hoolkii Xaflada lagu qabtay ee Magaaladda London ayaa Xafladii Madaxweyne Garguurte ka huleelay iyagoo Muraala dilaacsan kadib markii loo diiday inay Munaasabada ka hadlaan.. Dhalinyarada la dagaalanka qabyaalada oo niyad wanaagsan ku tegay xaflada ayaa tiiraanyo kala laabtay xaflada markii rag xildoona is hortaageen inay fariimahooda bulshada gaarsiiyaan.
Kooxda Qayladhaan oo ka mida halgamayaashii u dagaalamay in qaswadayaashii Al-Shabaab iyo Xildhibaanadii tirada badnaa la wiiqo ayaa loo diiday inay ka heesaan xafladii Madaxweynaha loo sameeyay iyagoo sheegay inay sameeyeen hees loogu tala galay soo dhaweeynta Madaxweynaha Federalka Somalia.
Wariye Cabdirisaaq Socota ayaa xaqiray xitaa inuu sheego magaca Fanaaniinta Kooxda Qaylodhaan wuxuuna madasha ka sheegay kaliya Gaadaco ,Hibaaq iyo Faysal.
Fanaanada Hibaaq Mohamed oo Fanka Somalida ku jirta wax ka yar lix bil ayuu Cabdirisaaq Socoto tilmaamay inay tahay Fanaanada Telefishinka Qaranka.
Fanaanka Cabdirisaaq Gaadaco ayaa xaflada ka laabtay isagoon hal hees ka qaadin,waliba asagoo ka mid ahaa Fanaaniinta Waaberi.
Abwaanad Diyaano oo Makarafoonka xoog ku qabsatay ayaa shacabka u sheegtay inay qabanayaan banaanbax ka dhana Madaxweyne Hassan Mohamud Alasow hasse yeeshee waa laga fara maroojiyay Makarafoonka.
Wariyeyaashii ka socday Telefishinka oo qorsheeynayay inay Live u tebiyaan barnaamijka ayaa ka laabtay xafladii markii ay garwaaqsadeen in madasha loo xiray telefishinka Qaranka oo kaliya.
Hoolka Xaflada lagu qabtay oo lagu kireeyay toban kun waxaa shan kun bixiyay Jaaliyadda Somalida UK halka shanta kalena Dowladda Ingiriiska bixisay.
Guddi Madaxweyne Garguurte ka soo diray Muqdisho oo loogu tala galay diyaarinta xafladiisa iyo guddi laga xulay Somalida Ingiriiska ayaa isla gartay nidaamka xaflada sida dadka khudbadaha ka jeedin doona madasha,fanaaniinta ka heesi doona hasse yeeshee waxay sheekada ku dhamaatay in Madaxweyanaha khudbad laba saac ka badan ka jeediyo xaflada kadibna sidaas lagu kala tago.
Si kastaba ha ahaatee ,Bulshada Somalida ayaa xaflada ka dareeray markii uu khudbada bilaabay Madaxweyne Hassan Mohamud Alasow (Garguurte)